Shirkada FAVORI oo maanta la wareegtay howlihii garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho (Sawirro) | Salaan Media
Shirkada FAVORI oo maanta la wareegtay howlihii garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho (Sawirro)
Munaasabad ay xilalka ku kala wareegayeen Shirkada SKA iyo FAVORI ayaa maanta ka dhacday garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, iyadoo munaabada ay ka qeyb galeen Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda iyo madaxda labada shirkadood.
Munaasabadan oo aheyd mid si heer sare ah loo soo qaban qaabiyay ayaa waxaa hadalo ka jeediyay Wasiirka Arrimaha Gudaha, Wasiirka Warfaafinta, Madaxda labada shirkadood ee ku kala wareegay maamulka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde.
Ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay Wasiirka Warfaafinta, Boostada, Isgaarsiinta iyo Gaadiidka C/llaahi Ciilmooge Xirsi, isagoo sheegay in munaasabadan ay qeyb ka tahay qorshihii shirkada SKA ay maamulka garoonka ugu wareejin laheyd shirkada cusub ee Turkiga laga leeyahay.
Wasiirka Warfaafinta ayaa sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo in shirkada cusub ee FAVORI ay wax weyn ku soo kordhin doonto garoonka diyaaradaha Aadan cadde, isagoo tilmaamay in wixii hada ka dambeeyay ay howsha garoonka ay la wareegeyso Shirkadan.
Madaxa Shirkada SKA ee maamulka garoonka wareejineysay Mr Sean Mendis ayaa sheegay in mudadii saddexda sano ay wadeen howlaha garoonka wax badan qabteen, isagoo u mahad celiyay dowladda Soomaaliya, waxaana uu cadeeyay in maamulka garoonka ay ku wareejinayaan shirkada cusub ee FAVORI, isla markaana ay ku faraxsan yihiin.
Sidoo kale waxaa munaasabada xil wareejinta ka hadlay Madaxa Shirkada FAVORI Ahmed Getin, isagoo sheegay in muddo sideed bilood gudahood ay wax weyn ku soo kordhin doonaan howlaha garoonka, isagoo ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay soo dhoweeyaan howlaha ay qaban doonaan.
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka C/kariin Xuseen Guuleed oo ka hadlay maamul wareejinta garoonka ayaa ka codsaday in shirkadaha diyaaradaha ay la qabsadaan maamulka cusub ee garoonka lagu wareejiyay, isagoo u jeediyay in hadii ay wax dhib ah dareemaan ay u soo gudbiyaan madaxda shaqada ku leh.
Shirkada cusub ee FAVORI ayaa horay u soo bandhigtay naqashada ay ku dayactireyso garoonka diyaaradaha Aadan Cadden, kuna ballaarineyso, waxaana ay dhowaan dalka ay keensatay qalabkii ay ku howl geli laheyd.